Red kabeeji salad na arụrụ n'ụlọ Mayonezi. Akwa maka tosti | Ntụziaka
Red kabeeji salad na arụrụ n'ụlọ Mayonezi
Ascen Jimenez | 07/04/2021 10:30 | Salads
Kwadebe nke mbụ a uhie kabeeji salad ọ dị mfe. Naanị anyị ga-egbutu ihe ndị ahụ nke ọma (kabeeji uhie, karọt na pịkụl) ma gwakọta ha. Mgbe ahụ, anyị ga-agbakwunye Mayonezi na-atọ ụtọ.
Anya na Mayonezi n'ihi na, ịgbaso ihe ngosi ndị m tinyere na ngalaba nkwadebe, ọ naghị egbutu ya. Ugbua agwala m gị na ịkọwapụta ya enweghị ike ịdị mfe.
Enwere ike ije ozi ya dị ka ihe izizi ma ọ bụ dịkwa ka onye mbido, na-etinye ngaji ole na ole na tost. Ma ị họọrọ nhọrọ nke mbụ ma ọ bụ nke abụọ, echefula banyere ya azu ankovi. Ọ na-enye ya a pụrụ iche aka.
Salad dị iche iche dị ezigbo ụtọ
Oge niile: 20 m
N'etiti 300 na 400 g nke kabeeji uhie
120 g nke karọt (ibu mgbe akpịrị)
4 pickles na mmanya
1 akwa ọhụrụ
150 g mmanụ sunflower
A na-agbaji mmiri lemon
Anfọdụ anchovy fillets na mmanụ
Anyị na-asa akụkụ kabeeji uhie ma bee ya nke ọma.
Anyị na-etinye ya na nnukwu efere.
Anyị na-ehichapụ karọt ma bee ya.
Anyị na-etinye ya n'otu efere ebe anyị nwere kabeeji na-acha uhie uhie.
Anyị na-egbutu pickles.
Anyị na-etinye ha na efere ebe anyị nwere ihe ndị ọzọ fọdụrụnụ.
Gwakọta nke ọma na ngaji osisi.
Ugbu a, anyị na-akwadebe Mayonezi arụrụ n'ụlọ. Iji mee nke a, anyị na-etinye akwa, nnu, mmiri mmiri nke lemon mmiri na mmanụ sunflower n'ime igbe dị ogologo. Anyị na-ewebata igwekota ruo mgbe anyị ruru na ala nke iko ahụ.
Na-enweghị ibuli igwekota site na ala ahụ, anyị na-arụ ọrụ ya. Anyị edoziwo igwekota maka opekata mpe 30 sekọnd. Mgbe ahụ, anyị na-emegharị ya nke ọma, na-agbago na ala ntakịrị ntakịrị.
Anyị na-agwakọta Mayonezi anyị na akwụkwọ nri.
Anyị na-eje ozi na mpekere nke toasted achịcha na top ọ bụla tost na otu nke anchovy.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Recetin » Ntụziaka » Salads » Red kabeeji salad na arụrụ n'ụlọ Mayonezi
Nne nne donuts